အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၂၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
● ဘုရားသုံးဆူ နေ့ရက်များ (၁၀)
ကိုဇော်ထွန်းနဲ့က ကျနော် ကျောင်းမှာကတည်းက သိတယ်။ သူက ဒေသကောလိပ်ပြီးတော့မှ ဆေးကျောင်းရောက်လာ တာ ဖြစ်ပြီး၊ ကျနော်တို့က ၁၀-တန်းအောင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် တန်းရတဲ့နှစ်မှာ ဆေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် တက်ရ တယ်။ သူတို့ အတန်းက ကျနော်တို့ထက် ၆-လလောက်စောပြီး၊ စီနီယာ အတန်းဖြစ်လာတယ်။ ကိုဇော်ထွန်းကို သိရတဲ့ အကြောင်းက သူ့အစ်ကို ကိုဇော်မင်း (ဒေါက်တာဇော်မင်း) နဲ့ ပတ်သက်တယ်။ ကိုဇော်မင်းနဲ့ ကျနော်၊ ကိုမင်းလွင်တို့က ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းကိစ္စတွေ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လုပ်ရင်း ရင်းနှီးလာကြတယ်။ ဆေး-၂ မှာလည်း စာပေဝါသနာပါတဲ့ အုပ်စုက နည်းတော့ ကျနော်တို့ အတန်းမတူပေမယ့် ပေါင်းမိကြတယ်။ မကြာခဏ ဆိုသလို စကားဝိုင်းဖွဲ့မိကြတယ်။ ကိုဇော်မင်းက အဲသည် အချိန်မှာ ကျောင်းပြီးလို့ အင်းစိန်၊ ဖော့ကန်ဖက်မှာ ဆေးခန်းတခုဖွင့်ပြီး ထိုင်နေတယ်။ ကျနော်က အင်းစိန်မှာ နေတော့ တခါတလေ သူ့ဆေးခန်းကို လိုက်သွားတယ်။ လူနာရှင်းနေတဲ့အခါ စကားပြောဆိုကြပေါ့။ တခါတလေလည်း ကျနော်တို့က RIT ရှေ့မှာရှိတဲ့ (စိုက်ပျိုးရေးဌာန ဝင်းအတွင်းက) သူတို့အိမ်ကို သွားလည်တတ်တယ်။ အိမ်ကတော့ အစိုးရက ပေးထားတဲ့ အရာရှိအိမ်ဖြစ်ပြီး၊ ခြေတံရှည် တထပ်အိမ်ကလေးပဲ။ ကျနော်က သူ့အစ်ကို ကိုဇော်မင်းနဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်တော့ ကိုဇော်ထွန်းက ကျနော့်ထက်အတန်းကြီး (စီနီယာ) ဆိုပေမယ့် စကားဝိုင်းထဲ ဝင်လို့မရဘူး။ သူ့အစ်ကိုက သူ့ညီကို ဟန့်ထားပုံရတယ်။ ကျနော်တို့ စကားထိုင်ပြောနေရင် ကိုဇော်ထွန်းက အိမ် အပေါ်တက်လိုက်၊ အောက်ဆင်း လိုက်နဲ့ ချောင်းနေတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၈၈၊ ဇွန်လသပိတ် ကျောင်းမတက်ရေးကိစ္စမှာတော့ ကိုဇော်ထွန်းက ကျောင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွ ဦးဆောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ပုံကဒီလို။ ကျနော်တို့ ဆေးတက္ကသိုလ်-၂ မှာ ကျောင်းသားအရေးအခင်း မတ်လ ကျောင်းတွေ ပိတ်ပြီး၊ ပြန်ဖွင့်တော့ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်း ကိုမင်းလွင် (3rd M.B.,B.S) နဲ့ အတန်းတူ ကိုမင်းတို့ သပိတ်ပါဝင်ခဲ့မှုနဲ့ ကျောင်းထုတ်ခံရတယ်။ ဆေး-၁ မှာလည်း ကျောင်းသား အချို့ကျောင်းထုတ်ခံရတယ်။ ကျနော်တို့က ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်တက်ခွင့်ပေးရေးနဲ့ အကယ်၍ ခွင့်မပေးရင် ကျောင်းမတက်ဘဲ ဆန္ဒပြကြမယ်လို့ စည်းရုံးကြတယ်။ ကျနော်တို့ ကျောင်းကလူတွေက စိတ်ဝင်စားဟန် မပြကြဘူး။ “ဒီမောင်တွေက သူ့ဘာသာနေလည်း စာမေးပွဲက ကျမှာပဲ။ ကျောင်းလည်း သူ့ဘာသာ ထွက်ကြရမှာပဲ။ သိပ်မထူးပါဘူး။ သူတို့ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရရေးလည်း စိတ်မဝင်စားပေါင်” ဆိုတာမျိုး တုံ့ပြန်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာ အဲဒီတဝိုက်မှာ စာမေးပွဲတွေက ဘာသာတခုပြီးတခု ဆက်တိုက် ဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီတော့ စာမေးပွဲတွေ ကို အနည်းဆုံး ဆိုင်းငံ့တာ၊ ရွှေ့ပေးတာမျိုးတော့ လုပ်စေချင်ကြ တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုဇော်ထွန်းက နံရံကပ်ပိုစတာ တွေ ကပ်တာ၊ အခန်းတိုင်းကို စာတန်းတွေ လိုက်ထည့် ထားတာလုပ်ပြီး စည်းရုံးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းမတက်ရေး ကမ်ပိန်း လှုပ်ရှားမှုကို ဆေး-၂ က စခဲ့တယ်။ [ဆေး-၂ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမျိုးသွယ်က သူတို့ကို ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးဖို့ တာဝန်ယူတယ်၊ ကျောင်းပြန်တက်ကြပါ ဆိုတော့ မရတော့ဘူး။ အဆောင်မှာ ကျောင်းမတက်ရေး ‘ဖဲဝိုင်း’တွေက အရှိန်ရနေကြပြီ။ ရှုံးသူရှုံးလို့ နိုင်သူနိုင် ပွဲကြီး ပွဲကောင်း ဖြစ်နေကြပြီ။]
ဆေး-၂ က ကျောင်းသားတွေ ဇွန်လသပိတ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မိန်း (ပင်မ) ထဲ သွားပူးပေါင်းကြတော့ အဲဒီ သပိတ်စင်မြင့်မှာ ခွဲစိတ်ခန်းဝတ်ရုံ အစိမ်းကိုဝတ်၊ ခွဲစိတ်ခန်းက မျက်နှာဖုန်းကိုတပ်လို့ ရဲရဲတောက် မိန့်ခွန်းတက်ပြောနေတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ကို တွေ့ကြရတယ်။ ကျနော်တို့က ကိုဇော်ထွန်းမှန်း ချက်ချင်း သိကြတယ်။ နောက်ပိုင်း ၈၈၈၈ ကာလ၊ သပိတ်တွေ အရှိန်မြင့် ဆေး-၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ့ကြတော့ အတန်းကြီးဖြစ်တာရယ်၊ သူ့တက်ကြွစိတ်ရယ် ကြောင့် ကျနော်တို့က ကိုဇော်ထွန်းကို ဆေး-၂ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် နေရာပေးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ကျနော်တို့ ဆေး-၂ ကျောင်းသားတွေနဲ့ လာ မလှုပ်ရှားဘူး။ သပိတ်အင်အားစုတွေ စုဖွဲ့ထားတဲ့ အထွေထွေ သပိတ် ကော်မီတီ (GSC) မှာ တာဝန်ယူ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ တယ်။ သပိတ်ပြီးပြန်တော့လည်း ဦးနုဦးဆောင်တဲ့ ဒီ/ငြိမ်းကော်မီတီမှာ ‘ငါ.. ထိန်းရမယ်ကွ’ ဆိုပြီး အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ကြားရတယ်။ နောက်ပြီး နယ်စပ်ရောက်မှသာ DAB တပ်ပေါင်းစုမှာ (GSC) အနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရောက်လာကြောင်း၊ ပါဝင်ကြောင်း သိကြရတယ်။ ကျနော်တို့ ဆေး-၂ က အတန်းကြီး ဒေါက်တာ ကျော်သက်ဦးနဲ့ ဘားအံက ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီသူ ဒေါက်တာမြင့်ချိုလည်း အခြား မဲသရေစခန်းကို ရောက်လာကြောင်း သိရတယ်။
ကိုဇော်ထွန်းက တက်ကြွတယ်။ ရိုးသားတာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာ မလိုဘူး။ ဆေးပညာအပေါ်မှာလည်း လေးနက် တယ်။ ပုဆိုးကို တိုတိုဝတ်၊ စစ်အင်္ကျီလက်ခေါက်ဝတ်လို့ ကေဒါကောင်းတယောက်လို နေတတ်တယ်။ ဆေးကုသပေးစရာ ရှိရင် လည်း စိတ်ပါလက်ပါ ကုသတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်တော့ နည်းနည်း မြောက်ကြွကြွ နိုင်သလို ထင်ရတယ်။ ဒါပေ မယ့် ကျန်တဲ့ ကျနော်တို့ ဆေးကျောင်းသားအုပ်စုနဲ့ မရင်းနှီးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေရတယ်။ တခုခု ခံနေသလိုပဲ။ တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေသလို ခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့် စခန်းကော်မီတီထဲမှာ ၈ မဲ-၃ မဲ ဖြစ်နေရ တဲ့ကိစ္စမှာ သူက တဖက် ၃-မဲထဲ ပါနေရတဲ့အတွက်လည်း နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေရသေးတယ်။ အဲဒါအပြင် အဲဒီကာလမှာ ကိုဇော်ထွန်းက ကျူးဘားတော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ချေဂွေဗားရားရေးတဲ့ “ပြောက်ကျားစစ်” စာအုပ်ကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ၊ မြန်မာဘာသာကို ပြန်နေသေးတယ်။
အဲဒီမှာ ရဲဘော် ၆၂ ယောက်ပဲ ဆိုတော့ သိပ်မကြာခင်မှာ တယောက်အကြောင်း တယောက်သိ၊ သဘောထား မတူညီကြ ပေမယ့် တကယ့်ရဲဘော်အရင်းတွေလို ရင်းနှီးလာကြတယ်။ စခန်းမှာ ကက်ဆက်လေးတလုံး ရှိတယ်။ ဆရာကြီးတွေက ခင်ညွန့်ရည်ရဲ့ “စမ်းချောင်းလေး ရှိရာအရပ်ဆီ ကျမသွားရပါဦးမည်” ဆိုတာမျိုး ကက်ဆက်ခွေကိုဖွင့်ဖို့ လုကြတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ “ဂန္ဓဝင်စိမ်း” တို့၊ စိုင်းထီဆိုင်တို့၊ ခိုင်ထူးတို့ ခေတ်ပေါ်တေးသွားတွေကို ပိုလို့ သဘော ကျကြတယ်။ စခန်းမှာ ဂီတာလည်းရှိတော့ တခါတလေ ဂီတဆည်းဆာလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ တခါတလေ ည မအိပ်ခင်မှာ လည်း တောင်တောင်အီအီ သူ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်အကြောင်း စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ဘဝရဲ့ ဒဿနပဲဆိုဆို အချစ်၊ ဘဝ၊ မိန်းမ… အိမ်ထောင်ရေး၊ မိသားစု စသည်ဖြင့် ရှုမြင်ပုံတွေကို ဖလှယ်မိကြတယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံးက လူပျိုတွေ၊ ဆရာကြီးတွေ အများစုကတော့ အိမ်ထောင်ရှိကြပြီးသား၊ အသက်အရွယ်အားဖြင့်၊ အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်လည်း ကျနော် တို့ထက် လူ့ဘဝကို လက်တွေ့ဖြတ်သန်းမှု ပိုများကြသူတွေ…။
လသာတဲ့ ညအောက်မှာ ကျနော်တို့ အလွမ်းတွေက ဘယ်ကိုလွမ်းရမှန်း မသိကြဘူး။ အလွမ်းတွေက ပရမ်းပတာ။ ရည်းစားဆိုလို့ နာမည်ခံရုံလောက်သာ ရှိခဲ့ကြတာ။ အဆောင်ရှေ့ သီချင်းဆိုဖူးရုံ၊ ခြေအေးဝမ်းယောင် သူမသိ ကိုယ်ပိုး ဘဝတွေလောက်နဲ့။ အဝေးကနေ ဇီးကွက်လိုလို ညငှက် အော်သံလည်း ကြားနေရတယ်။ လရောင်က ကျနော်တို့အိပ်နေ တဲ့ ဇရပ်ထဲကို ဖြာကျနေတယ်။ တခါတလေ ဆောင်းရနံ့ သင်းလာတဲ့ လေပြည်နဲ့အတူ ညမွှေးတတ်တဲ့ ပန်းရနံ့တွေက ကျနော်တို့ခြုံစောင်တွေအပေါ်ကို ဖြတ်ပြီး တိုက်ခတ်သွားတတ်တယ်။ ကျနော်တို့က မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ကိုယ်စံထားတဲ့ ကိစ္စမျိုးကို ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတယ်။
“ကျနော်ကတော့ ကျနော်ယူမယ့် မိန်းကလေးကို စံ ၃-မျိုး သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျ” ကျနော်က ပြောမိတယ်။
“အယ်လဲ့… လုပ်ပါဦး” တယောက်က ဝင်ထောက်ပေးတယ်။
” ပထမအချက်က အရှေ့ကို သိပ်မထွက်ရဘူး၊ အနောက်ကို သိပ်မဝင်ရဘူး။ ဆိုလိုတာက သိပ်ပြီးထက်တဲ့ မိန်းမမျိုးကို ကျနော် မကြိုက်တတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတောမတိုးတဲ့ တုံးတုံးကြီးလည်း ဖြစ်မနေရဘူး။ နောက်တချက်က.. ကြည့်လိုက် ရင် အခု ရေချိုးထားသလို သန့်စင်နေတာမျိုး ဖြစ်ရမယ်”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ…. ကျန်တဲ့ တချက်လုပ်ပါဦး”
“ကျနော့်ကိုချည်း သိပ်မမှီခိုရဘူး။ သူ့ဘာသာ ခြေထောက်ပေါ်လည်း ရပ်တည်နိုင်ရမယ်” … ကျနော်က ပြောတယ်။ ကျနော်တွေ့ဖူးတယ်။ အိမ်ထောင်တွေမှာ အမျိုးသမီးဖြစ်သူက မှီခိုလွန်းတဲ့အခါ သူ့လွတ်လပ်မှု ဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ ထင်မိ တယ်။ သူ့ဘာသာ ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်တာဟာလည်း အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးအတွက် ပိုပြီးကောင်းစေတယ်လို့ ကျနော်ထင်မိတယ်။
“ငါကတော့ ဘာမူမှ မရှိဘူး။ အဆင်ပြေရင် လာဟေ့… ကောက်ရိုးပုံပဲ” ကျနော်တို့ရဲဘော် တယောက်က ဝင်နောက်တယ်။
ကိုမိုးသီးဇွန်ကတော့ “လ- ၃ လုံးမူ” လို့ ပြောဖူးတယ်ဗျ။ ရဲဘော်တယောက်က ဝင်ပြောတယ်။ အမှန်က သူအတည်ပြော တာလို့တော့ ကျနော်မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့ဆီမှာ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု က- ၃ လုံးမူ (အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံရမယ်၊ အကန့်အသတ် ရှိရမယ်၊ အကျိုးအမြတ် ရှိရမယ်) စတဲ့ မူဝါဒမျိုးတွေ ကြားဖူးတဲ့အခါကျတော့ လ-၃ လုံးမူဆိုပြီး တမင် နောက်တာလို့ ထင်နေတယ်။ “လုပ်ပါဦး လ-၃ လုံးမူ” …….
“ပထမဗျာ လွတ်လပ်ရမယ် (လ)၊ သူများပိုင်ရှင် ရှိနေရင် မဖြစ်ဘူးလေ” ဟုတ်သား။
“ဒုတိယကတော့ လွယ်ရမယ် (လ)၊ တော်လှန်ရေးသမားတွေကွာ၊ အချိန်လည်း များများမပေးနိုင်ဘူး။ သူက သိပ်ကြီး အိုင်တင်ခံနေရင်လည်း ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ၃-နှစ် ၃-မိုးဆိုတာတွေနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူးကွ၊ လွယ်ရမယ်” ဒုတိယ (လ) ကို ဒီလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တယ်။
“တတိယ (လ) ကတော့ လူလစ်ရမယ်။ လူမလစ်ရင် ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူးလေ။ မဟုတ်ဘူးလား” ဟား… ဟား…ဟား… ရယ်သံတွေ ဆူသွားတယ်။ ကျနော်တို့က အဟုတ်မှတ်လို့ နားထောင်နေကြတာ။
ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေ သွားရင်း၊ လာရင်း လူငယ်ပီပီ မိန်းကလေးလှလှမြင်ရင် သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဘုရား သုံးဆူဒေသက အလှပဂေး မဖြူ၊ မနီ တို့ကို ပိုးပန်းတာလည်း ကျနော်တို့စခန်းက မနည်းလှပါ။ စခန်းခေါင်းဆောင်တွေက အစ၊ ရဲဘော်တွေအထိ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့က မြို့ကြီးသားတွေ မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့ တချိန် မြို့ပြန် ကြရမယ်လို့ အိပ်မက်တွေ ရှိနေ တုန်း။ တောထဲမှာ တွေ့တာနဲ့ ဖြစ်သလို အိမ်ထောင်ပြုတာမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ကြဘူး။ အနည်းဆုံး ဈေးတင်ထားချင်ကြပါသေးတယ်။ တော်လှန်ရေး ဘယ်အချိန်အောင်မယ်ဆိုတာ မကျိန်းသေလှပေမယ့်၊ စစ်ပြန်တွေအတွက် ရွာကျန်လေးတွေတော့ ရှိကောင်းပါရဲ့ ဆိုတာမျိုး စိတ်တင်းထားကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆရာဦးမြင့်လှိုင်တို့၊ ဆရာဦးအောင်မြင့်စိုးတို့ ဆွေးနွေးတဲ့ အချစ်ကိစ္စကို ကြားရတော့ နည်းနည်းတော့ ရုပ်ကြမ်း ဆန်လွန်းတယ် ထင်မိတယ်။ ကိုဌေးအောင်ကတော့ အဲဒီအချိန်က လူပျိုကြီး၊ မိန်းမ မရှိသေးဘူး။ သူကတော့ ဒီဘာသာ ရပ်မှာ ခပ်မဆိတ်ပဲနေတယ်။
“အမျိုးသမီးကလည်း ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ကွာ၊ ကိုယ်ကလည်း အမျိုးသမီးကို ချစ်တယ်ကွာ၊ နှစ်ဦးကြည်ဖြူရင် ပြီးတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ အခြေအနေတွေကို ထည့်စဉ်းစားနေရမှာလဲ” ဆိုတယ်။ ဟုတ်တော့၊ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ ဒါဖြင့်ဆိုရင် “အချစ်ဟာ တကြိမ်ထက် ပိုရှိနိုင်သလား”။
“ရှိနိုင်တာပေါ့။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ တယောက်နဲ့ တယောက်လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာကြတာ။ ယောက်ျားကလည်း မိန်းမကိုလိုအပ်တယ်။ မိန်းမကလည်း ယောက်ျားကို လိုအပ်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာတွေက လူမှုအဖွဲ့အစည်းက တနည်းအားဖြင့် စည်းနှောင်ထားမှုတွေပဲ။ အချစ်ဆိုတာက ဒီလိုစည်းနှောင်ထားမှုတွေ ထက် ပိုပြီးလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။” သူတို့ပြောတာကို ကျနော်တို့ လူငယ်အများစုက လက်မခံချင်ကြဘူး။ ကျနော် တို့က စံရည်အပြည့်အဝကို မျှော်မှန်းထားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ကျနော်တို့က သိပ်ပြီး စံပြအခြေအနေကို မှန်းထားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် လက်တွေ့မရှိကြသေးတဲ့ အူရိုင်း မလယ်မဝယ်လေးတွေ ဖြစ်နိုင်သလို၊ သူတို့ ပတ်သက် တွေ့ကြုံပြောနေကြတဲ့ အချစ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ လက်တွေ့မကြုံရသေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီလို ဘုန်းကြီးကျောင်း စခန်းသစ်မှာ နေစဉ်မှာပဲ ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ (၄)၊ မင်းသမီးစခန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ABSDF အရေး ပေါ် ညီလာခံကို တက်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန်က သေဘောပိုးစခန်း တပ်ရင်း (၂၀၄) က ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ လာတက်တယ်။ မင်းသမီးစခန်း ညီလာခံအပြီးမှာ ကိုမိုးသီးဇွန်ကို ဗဟိုကော်မီတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရ တယ်။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကိုကျော်ကျော်က အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာတယ်။ ဒီညီလာခံကို ကျနော်နဲ့ ကိုဌေးအောင် ရောက်တယ်။ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ ကျနော်တို့ကို နေရာချထားတဲ့ အိမ်တလုံးမှာ ကျနော်နဲ့ ကိုဌေးအောင် ၂ ယောက်သား ကွေးနေကြရတယ်။ ဆောင်းတွင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ အလျောက် အချမ်းပြေ နေပူစာလှုံလိုက်၊ လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ ညီလာခံကျင်းပချိန်တွေမှာ ပြင်ပမှာ အချိန်ဖြုန်းနေကြရ တယ်။ ကျနော်တို့အရေး တင်ပြဖို့ ညီလာခံအလှည့်၊ အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြရတယ်။
ကျနော်တို့က ဒီညီလာခံကို ကျနော်တို့ ရဲဘော် ၆၂ ယောက်ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ညီလာခံက အသိအမှတ်ပြုရေး အတွက် ရောက်လာကြတာ။ ကျနော်တို့က အမြင့်ဆုံးအဖြစ် ကျနော်တို့အစုကို ဘုရားသုံးဆူ ဒေသမှာ ABSDF တပ်ရင်း (၁၀၃) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့၊ အကယ်၍ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး ABSDF တပ်ရင်း (၁၀၁) ခွဲ (၂) အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုပေးဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်။ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် အများရှေ့မှာ ကျနော်တို့ပြဿနာကို တင်ပြရတယ်။ လျှောက်လဲပြီး ရပ်တည်ချက် တနေရာအတွက် တောင်းကြရတယ်။ ကိုဌေးအောင်က ရှေ့နေတဦးပီပီ တင်ပြပုံ အပြော အဆိုကောင်းတယ်။ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အများကနေ စာနာမှုရအောင် တင်ပြပြောဆိုနိုင်တယ်။ ညီလာခံကနေ ကျနော်တို့ကို ယာယီအဖြစ် တပ်ရင်း (၁၀၁) ခွဲ (၂) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ မင်းသမီးစခန်းက ပြန်လာတော့ အောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးက ဝမ်းသာကြတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ နောက်ဖက်၊ တောင်ပူစာလေးရဲ့ ဘေး၊ ရေကန်နံဘေးမှာ ကျနော်တို့ စခန်းသစ်ဆောက်ဖို့ စိုင်းပြင်းကြတယ်။ အဲဒီအချိန် မှာပဲ ဘုရားသုံးဆူကို ရန်သူ့ထိုးစစ်၊ စစ်ကြောင်း တက်လာမယ့် အသံက ကြားနေရပြီ။